Lostda efunahụ, mana aghụghọ nke ntuli aka nke UNWTO site na nwa akwukwo Georgia nwere ike ịga nke ọma
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Lostda efunahụ, mana aghụghọ nke ntuli aka nke UNWTO site na nwa akwukwo Georgia nwere ike ịga nke ọma
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
4 min gụọ
dere Juergen T Steinmetz
Onye isi ala US Donald Trump na odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili nwere ihe jikọrọ. Ọchịchọ ịnọ n'ọchịchị n'agbanyeghị otu esi.
Nna-ukwu na ịmegharị ntuli aka si Georgia, nke a bụ mba Georgia
Ndi ode akwukwo abuo abuo, otu onye enyemaka SG na otu onye isi okwa UNWTO bidoro igbasa ozi banyere “Decency in Election” na US Network World Tourism Network.
Mba 35voting na-agbachi nkịtị mgbe ha kwusịrị ma kwe nkwa ụlọ ọrụ mpaghara UNWTO na nloghachi maka ntuli aka.
Onye isi ala US Donald Trump gbalịrị ma furu efu. UNWTO Secretary General Zurab Pololikashvili na-agbasi mbọ ike ugbu a, ọ ga-enwerịrị ka ọ gbanahụ ya - ntuli aka ntuli aka nke ahụ bụ. "Ọ bụ nwoke maara ihe", bụ nzaghachi nke onye ndu ndị njem na nyocha eTN na nso nso a, na-echegharị Zurab.
O yikarịrị ka ndị ọkachamara na-eme njem nleta agaghị ebuso isi ụlọ ọrụ UNWTO na Madrid dị ka ndị ntuli aka hiere ụzọ mere ụnyaahụ n'isi obodo US Washington DC na-amanye ha ịbanye na US Capitol.
O di nwute, ndi oru na njem na njem nlegharị anya ekwughi okwu. Ndị minista na-ahụ maka njem na-eme ntụli aka. Agbanyeghị, ọ bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ ise nke mba ndị UNWTO ka akwadoro ịtụ vootu. Ha gbachiri nkịtị, ihe kpatara ya bụ iji aghụghọ.
Mba dị jụụ, n'ihi na Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili, lebara anya n'ime afọ 3 gara aga naanị na mba 35, na-eleghara 80% nke mba ndị otu UNWTO anya.
Mba 35 "super" a nwere ike. Mba 35 hiwere otu kansụl. A na-ahapụ ha ka ha votu na nhoputa ndị odeakwụkwọ na-abịanụ. Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO chọrọ ka a họpụta ya site na ụgwọ ọ bụla. Ọ kpọkwara asọmpi asị.
Emechiela ọnwa a, nsogbu ọhụrụ nke Coronavirus na-agbasa kwa na Spain.
UNWTO mere ka ọ bụrụ iwu na ndị ozi njem njem nke mba iri atọ na ise na-atụgharị uche gaa Madrid na Jenụwarị 35, 18, ma ọ bụrụ na ha chọrọ inwe ọnụ na nhoputa ndi odeakwụkwọ 2021.
Ugbu a SG Zurab Pololiokashvili nke si Georgia na Heritage bụ Sheika Mai Bint Mohammed Al Khailfa nke Bahrain na-azọ ọkwa ahụ. Nwa akwukwo Bahrain nwere ụgbọelu ụgbọelu nkeonwe iji gaa Madrid.
Zurab mere ihe niile o nwere ike ime ka o siere onye ọ bụla na-asọmpi ike ịbanye n'ụgbọ ahụ. O mere ka mpio ahụ dị mkpụmkpụ karịa ikwe ka windo dị ogologo karịa COVID-19.
Mba isii ọzọ chọrọ ịsọ mpi maka odeakwụkwọ ukwu ma nyefee akwụkwọ. Ọfịs Zurab jụrụ ha, na-azọrọ na ngwa ezughi ezu Aha 6 na mba 6 chọrọ ịsọ mpi na Mr. Zurab ahapụghị. Naanị Bahrain jisiri ike nweta akwụkwọ ederede ziri ezi.
Mgbasa ozi maka nwa akwukwo ohuru enweghi ike ime na oge ntinye. Zurab maara nke a, n'ihi na ọ bụ akụkụ nke egwuregwu ya ịmegharị.
Ọnọdụ ahụ mere ka onye bụbu ode akwụkwọ ukwu UNWTO (Dr. Taleb Rifai na Francesco Frangialli , onye bụbu onye enyemaka SG Dr. Geoffrey Lipman, onye bụbu onye isi nchịkwa UNWTO Carlos Vogeler) ịbanye na Netwọk Njem Nleta Ụwak na oku na-aga n'ihi nkwanye ùgwù na ntuli aka UNWTO.
An Emepere akwụkwọ ozi site na eTurboNews na December 11.
UNWTO azaghị akwụkwọ ozi ahụ. Onweghi mba guzoro ma bilie ọtọ, maọbụ zaghachi. Isi ụlọ ọrụ UN dị na New York anabataghị nnata nke arịrịọ ebugara. A na-ata ụta oge ezumike ahụ mgbe ụfọdụ.
Ọ bụrụ na Zurab merie ntuli aka na Jenụwarị 18, ọ ga-abụ ụbọchị dị oke mwute maka World Tourism. Ọ ga-abụ akara ọjọọ na nguzosi ike n'ezi ihe nke 35 UNWTO Executive Council kasashe.
eTurboNews natara otu akwụkwọ ozi doro anya Zurab na-ekesa ndị ozi na-eme ntuli aka nke njem. Ndị na-eme ihe ike na-ekesa akwụkwọ ozi a na naanị ebumnuche iji gbanwee ntuli aka wee wakpo onye ga-esi na Alaeze Bahrain.
Ka ọ dị ugbu a, Zurab ji UNWTO ego iji gazuo ụwa na azụmaahịa gọọmentị. N'ezie, ọ na-eme njem maka onwe ya, na-ekwe nkwa ọkwá dị elu n'ọchịchị ya ma ọ bụ ọfịs UNWTO na mba iji gbanwere votu.
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ọcha, ọ bụghị naanị na US White House, kamakwa na UNWTO.
Juergen Thomas Steinmetz anọgidewo na-arụ ọrụ na njem na njem ebe ọ bụ na ọ bụ nwata na Germany (1977).
Ọ tọrọ ntọala eTurboNews na 1999 dị ka akwụkwọ akụkọ n'ịntanetị mbụ maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
A mara nwoke ikpe afọ ise n'ụlọ mkpọrọ maka ịgbasa COVID ...
FTA na -agba ndị ụlọ ọrụ ụgbọ njem US ume ka ha mụbaa ịgba ọgwụ mgbochi ...
Saint Lucia melite na Ajọ Ifufe Elsa
Ọrụ 500,000 US ga-alaghachi na njedebe nke ...
Egburu ndị njem Russia anọ, merụrụ 16 na Turkey ...
MICE Business amaliteghachiri na Guam na ịgba ọgwụ mgbochi ...
IATA gbara ndi obodo ume ka ha soro WHO n’ nduzi na ...
Ụgbọ elu na-enweghị mgbochi iche na Singapore ugbu a na Lufthansa
Ụgbọ elu ndị mmadụ na Kabul furu efu na Iran
Ịga Zambia ma ọ bụ Zimbabwe ka ghọrọ ngwa ngwa ...
Eswatini Udo Mgbe Alaeze Ahụ Ghara Ime Ihe Ike ...
8 n'ime 10 ndị America na -akwado akwụkwọ ikike ngafe ọgwụ mgbochi
El Al Israel ụgbọ elu na-amalite ụgbọ elu na-aga ...
Gịnị kpatara Jamaica? Azịza nye US “Emela ...
Ọtụtụ ndị Thailand na -emepe ọzọ n'ime izu atọ
Yas Island Etihad Arena na -anabata kpakpando Bollywood Arijit ...
El Al malitegharịrị ụgbọ elu Budapest na ụgbọ elu Tel Aviv
Uru Lufthansa na -achọ ịbawanye site na US $ 2.5 ...
Ihe ịtụnanya Thailand na -ehulata na mmiri: The Rosewood Bangkok, a ...
Victoria House Resort & Spa, Belize mpụta ọhụrụ ...
Njem US: mmachi njem EU na -akụda mmụọ
Ụlọ ahịa ọla nke Bulgari dị na Paris kpochapụrụ na million 10 nde
Ụgbọ elu ọhụrụ si Ontario na Austin na Southwest ...
Air Canada machibidoro ụmụ anụmanụ nkwado mmetụta uche
US ga -emechi oke ala ya na Canada na Mexico mechie ...
Ihe ngosi Bahrain & Convention Center nwere ihe ọhụrụ ...
Ụgbọ elu si Kazakhstan maliteghachiri na mba 16 ugbu a
Agwaetiti Canary 'enweghị nchekwa' na -ekwu ...
OTDYKH Ntụrụndụ Fair 2021 Ga-eme na Moscow ...
Ryanair ji Shannon ọhụrụ bulie ụzọ Budapest ...
Afrịka bụ mpaghara njem ọhụrụ: mkparịta ụka na Naịjirịa ...
Onye isi oche Skål Asia: Zute nwa akwukwo Andrew J. Wood
East Africa States nakweere mpaghara COVID-19 njem nlegharị anya ...
'Ikike ịnwụ na COVID-19' ga-abụrịrị ...
Nlegharị anya nke ụlọ na-aga n'ihu ịlaghachi mgbe ...
Isi ihe ịma aka ndị njem na Europe pụta ìhè na ...
Southwest Airlines na -ekwupụta Onye isi ala ọhụrụ
Njem na UK dị oke ọnụ
Mgbachi ụlọ elu nke ụgbọ elu Scotland Air Traffic: Enweghị atụmatụ B
Nye Visas e-Tourist na India Ugbu a na-agba ume mbụ IATO ...
Hans Airways Signs Contract na Air Logistics Group
Kwadebe maka ahịrị mgbe ị na -efepụ na London Heathrow
Denmark mechiri mgbochi COVID-19 niile na Septemba 10
Traingbọ ala Thai na-azụ maka ndị ọrịa COVID-19 na-enweghị AC ma ọ bụ ...
A kọrọ akụkọ mgbawa nke abụọ n'ọdụ ụgbọ elu Kabul mgbe 13 ...
Emela njem na Spain, Portugal, Cyprus, Cuba ...
Ihe ọkacha mmasị gụnyere Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara ...
N'ime paịpụ, n'ime ogige nduru: Ebe ndị na -enweghị ebe obibi bi
Princess Cruises na -ebipụ Australia & New ...
Kedu ogige ntụrụndụ mba United States kachasị nwee mmekọrịta ezinụlọ?
Hurricane Olaf lekwasịrị anya na Mexico
Kedu ka ị ga -esi lanarị anụ ọhịa na -awakpo gị?
Allegiant na-ekwupụta ụzọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ iri abụọ na atọ
Mmachibido njem site na Mba na mpaghara dịka ...
Ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa dị mkpa ugbu a maka San Francisco ...
Seychelles Tourism na egwu iji nweta mbata 2021 ...
Onye mmeri nke Agent Agent Education: Sandals Resorts ...
Gulf Air amaliteghachila ụgbọ elu si Bahrain na Moscow ...
Kenya na-elekwasị anya njem nlegharị anya Africa iji belata COVID-19 ...
Ihe na-eme na Vegas Kwesịrị Masked